मेयर बनेर बेलबारीलाइ समृद्ध नगर बनाउंछु – ज्ञानेन्द्र सुवेदी
June 24, 2017 सम्पादक अन्तरबार्ता, ग्यालरी
बेलबारीमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुमध्ये मालपोत, नापी,इलाका प्रहरी कार्यालय, राष्टिय बाणिज्य बैंक जस्ता केही सरकारी कायालयकोस्थापनामा बिषेश र नेतृत्वत्वदायी भूमिका खेल्ने ब्यक्ति ज्ञानेन्द्र सुवेदी नै हुन् । त्यतिमात्र होइन,बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसको संस्थापक तथा अध्यक्ष,बेलबारी साना सहरी तथा खानेपानी आयोजनाका पनि अध्यक्ष र लायन्स क्लब बेलबारीका संस्थापक प्रेसिडेण्ट आदि जिम्मेवारीमा रहेर बेलबारीमा बिभिन्न संघ संस्था र योजना भित्रयाउने काममा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पनि उनै सुवेदी नै हुन् । मूलत बेलबारीको बिकाश निर्माणका लागि बनेको राजनितिक संसन्त्रमा पनि संयोजक भइसकेका सुवेदी बेलबारीका पर्यायवाची नै हुन् भन्दा नि फरक पर्दैन ।
२०१५ असोज ६ गते तेह्रथुम साब्ला ६ मा जन्मिएका ज्ञानेन्द्र सुवेदी २०२६ सालदेखि मोरगंको बेलबारीमा रहेर राजनितिक तथा सामाजिक काममा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ । २०३५ सालमा क्याम्पसेपढाइ शुरु गरेदेखि वामपन्थी राजनितिमा प्रवेश गरेका सुवेदी बेलबारीमा मात्र होइन, मोरगं जिल्लामै एक नेता र शिक्षप्रेमी तथा समाजसेवीका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । २०४२ सालमा पञ्चायत विरोधी मोर्चाप्रजातन्त्रिक राष्टिय एकता मन्चकोजिल्ला सदस्य भएपछि सक्रिय राजनितिमा होमिएका सुवेदी २०४३ सालकोपञ्चायती चुनावमा बेलबारी गाउँ पञ्चायतको चुनावमा जनपक्षीय प्रधानपञ्चको उम्मेद्धार बन्नुभएको थियो । २०४६ सालपछि एमाले बेलबारी ३ को वडा कमीटी सचिव, त्यसपछि गाउँकमिटी सदस्य, इलाका कमिटी सदस्य,क्षेत्रीय कमिटी सदस्य र दुइ पटकसम्म एमाले मोरगंको जिल्ला सदस्य भइसकेका स’वेदी पार्टीको आठौं र नवौं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि बन्न’भएको थियो । स्थानिय निकायको च’नावमा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका स’वेदी जिविस सदस्य भई मोरगंमै स्थानिय बिकास निर्माणका काममा सक्रिय हुनुभयो ।
सवेदी हाल नेकपा एमाले पार्टीको जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा आर्थिक बिभाग संयोजक समेत हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ २०७४ असार १४ गते हुन गइरहेको स्थानिय तहको चुनावमा नेकपा एमालेबाट मोरगंको बेलबारी नगरपालिकाको मेयरका लागि उम्मेद्धारी दिनुभएका सुवेदीसँग स्थानिय तहको निर्वाचन र उनकै उम्मेद्धारीकोबिषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी
तपाइका उम्मेद्धारी के का लागि र किन ?
मैले बेलबारीमा बिगत लामो समयदेखि सामाजिक कामको नेतृत्व गर्दै आएको छु। बेलबारी क्याम्पसको स्थापनादेखि ,बेलबारी साना सहरी खानेपानी आयोजना ल्याउनेर जनताको घरघरमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने लगायतका काममा मैले सफलतापुर्वक अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे। २०५४ सालकोस्थानीय निर्वाचनमा बेलबारीबाट वडा सदस्य निर्वाचित भएपछि र जिबिस सदस्य समेत भइ काम गर्दा मैले साबिक बेलबारी मात्र होइन, मोरगं जिल्लाकै बिभिन्न ठाउका जनताको सेवा गरिसकेको हुँ । बेलबारीमा गठित सर्वदलीय संयन्त्रको संयोजकका रुपमा रहेर समेत मैले सबै दलहरुको संयन्त्रमा पनि नेतृत्व गरिसकेको छु । त्यसैले मैले बिगतमा गरेको सामाजिक तथा राजनितिक भूमिकाको मूल्याकंन गरी नेकपा एमाले पार्टीले मलाई बेलबारी नगरपालिकाको लागि मेयरको उम्मेद्धार बनाएको हो। अहिलेसम्म गरेको सामाजिक र राजनितिक कामको अनुभवबाट सिकेका आधारमा सिंगो बेलबारीलाइ समृद्ध बनाउन नै मेरो उम्मेद्धारी आएको हो।
मेयरमा निर्वाचित भएपछिका तपाईका योजना के के छन्?
बेलबारी क्षेत्रका युवाहरुलाइ स्वदेशमै रोजगारी श्रृजना गरी बिदेश पलायन हुनबाट रोक्न र स्वरोजगार बनाउन आवश्यक निति बनाइ निब्र्याजी बिउ पूंजी उपलब्ध गराइनेछ । बेलबारीको फोहोरमैला ब्यस्थापन गरी त्यसबाट कम्पोष्ट मल तथा उर्जा उत्पादन गरिनेछ । बेतना सिमसार लगायतका बिभिन्न पर्यटकीय स्थलहरुको बिकासका लागि गुरु योजना बनाइनेछ भनेत्यस्ता पर्यटकीय स्थलहरुलाई राष्टिय तथा अन्तराष्टिय स्तरमा प्रबर्धन र विकाश गरिनेछ । प्रत्येक वडा कार्यालय तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा फ्री वाइफाइ जोन सहित पार्कर स्वीािगं पुल सहित मोनोरेलको ब्यबस्था गरिनेछ । धनपालगढीमा सबै जातजाती र धर्मसंस्कृति,संस्कार,भेषभूषा र रहनसहन झल्कनेसांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गरिनेछ । बेलबारीका बिभिन्न पर्यटकीय स्थलहरुमा पार्क,वनभोज स्थल र भ्यू टावरहरु र होम स्टहरु बनाइनेछ । बेलबारीमा कमसेकम ५० शैयाका नगर अस्पताल बनाइनेछ भने किड्नी, मुटु, कलेजोर क्यान्सरजस्ता गम्भिर प्रकृतिका रोग लागी आर्थिक समस्या भएका नगर क्षेत्रका बिरामीहरुलाइ उपचारको ब्यबस्था गर्ने ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
बेलबारीमा पर्ने सबैखोलानालाहरुमा बृक्षारोपण सहित तटबन्ध गरी बगरलाइ खेतीयोग्य जमीन बनाइनेछ । प्रत्येक वडामा कृषि बजार केन्द्रस्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
बेलबारीको मेयरमा तपाईले जित्ने आधार चाहिं के के हुन्?
मैले जस्तोसुकै प्रतिकूल अबस्थामा पनि समाजमै रहेर निरन्तर सामाजिक काम गरिरहें। चाहे पञ्चायत कालमा जनपक्षीय उम्मेद्धार भएर चुनाव लड्दा होस् वा बिगतको स्थानिय चुनावमा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिका रुपमा काम गर्दा नै किन नहोस् म जनताको सेवा र हितका लागि नै काम गरेको छु । तर धेरै तडक भडक नगर्ने र धाक अर्थात फूर्ती नलगाउनेबानी नभएकोकारण अहिले पनि धेरैले मलाइ ज्ञानेन्द्रकमजोर उम्मेद्धार हो भनेर हल्ला पिटाउँदा रहेछन् । तर मेरा प्रतिस्पर्धीहरुको खासै लामो राजनितिक र सामाजिक पृष्ठभूमि तथा इतिहास छैन । तर म पञ्चायती ब्यबस्थादेखि नै सामाजिक तथा राजनितिक क्षेत्रमा सक्रिय रहदै आएकोछु। बिपक्षी साथीहरुलाइ मैले कमजोर छन् भन्न खोजेको होइन तर उनीहरुले एक दुइ संस्थाको नेतृत्व गरे पनि मैले बेलबारीमा रहेर दर्जनौं संघ संस्थाको स्थापना र ्सञ्चालनकोसपलतापूर्वक नेतृत्व गरिसकेको छु । त्यतिमात्र होइन, हालसम्म मैले नेतृत्व गरेका संघ संस्थामा कसैले औंला ठड्याउने ठाउं पनि दिएको छैन । त्यसैले अनुभब र अन्य हिसाबलेपनि म नगरपालिकाकोमेयर बन्न सबैभन्दा सक्षम छु ।
कतिपय उम्मेद्धारहरु आफ्नो उम्मेद्धारी र आफ्नोबिगतकोप्रचारबाजीबाट बलियोभएको सावित गर्नखोजेर चर्चामा छन् तर तपाइं अलि गुमनाम देखिनुहुन्छ,यस्तो किन ?
म तडकभडक र उछिंखल प्रचारबाजीमा विश्वास गर्दिन । कुरामा भन्दा काममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँम । मेरो निति भनेकै थोरै बोल्ने र धेरै काम गने हो। त्यसैलेअरु उम्मेद्धारले जस्तो मिडियाबाजी र सस्तोलोकप्रियतातिर गएको छैन । नयाँपुस्ताकोसानो हिस्सा र अन्यत्रबाट बसाइंसरेर आएका कतिपय मतदातालाइ थाहा नहुन सक्छ तर त्यसबाहेक ज्ञानेन्द्र सुवेदीलाइ नचिन्नेमतदाता कोही छैनन्। मैले आफूलाई र्पचार गर्नु आवश्यक पनि छैन । सस्तोप्रचारवाजी त त्यसले गर्ने हो जसलाइ जनताले चिनेकै छैन । तर अहिलेका मतदाता तडकभडकमा विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुरा त पहिलो चरणको निर्वाचनले पनि सावित गरिसकेको छ । मैलें सिङो बेलबारी र बेलबारीबासीको हित, समृद्धि र बिकासको नेतृत्व गर्दैजनताकोसेवामा आफनो जीवनकोउर्जाशील जीवन समर्पण गरेको छु । त्यसैले जनताको सेवा गर्ने बाहेक मेरोअरु अभिप्राय छैन ।
म टुप्पाबाट पलाएको होइन, मैले उर्जाशील युवा अबस्थादेखि नै संघर्ष गर्दै संघर्षबाट नैआफ्नो हैसियत बनाएको मान्छे हुँ । म प्रतिकूल अबस्थामा बिदेशिएर अनुकुल हुँदा स्वदेश फर्की धनको धाकमा राजनिति गर्ने मान्छे होइन । बाहिरबाट हेर्दा सस्तो प्रचारबाजीमा रमाउदै चुनावमा उम्मेद्धार बनेका त्यस्ताहरुको फार्तिफूर्तिले कसैलाइ फलाना बलियो दाबेदार हो कि भन्न भ्रम भएको हुन पनि सक्छ । त्यो अस्वभाविक पनि होइन । तर मैले जनताको सेवामै पचास साठी बर्षको उमेर पार गरेकोले मलाई बेलबारीका जनताका समस्या के हुन्, उनीहरुले कसलाइ विश्वास गर्छन्, यहाँका संभावना के के छन्र हामीले जित्ने आधारहरु के के हुन् भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ । साबिक बेलबारी, कसेनी, डाँगीहाट र बाहुनी गाविस तथा हालको बेलबारी नगरपालिका त्यसैपनि हाम्रो पार्टी नेकपा एमालको राम्रो प्रभाव भएको क्षेत्र पनि हो । यो क्षेत्रमा बिगतका चुनाबहरुमा पनि एमालेले नैजित हासिल गर्दै आएकोलेपनि मैले जित्नेआधार र सुनिश्चितता छ ।
तपाइंको प्रतिस्पर्धा कुन पार्टीसँग हुन्छ ?
बहुदलिय ब्यबस्थामा निर्वाचनमा आउने स्वतन्त्रता सबैलाइ छ तर मेरो राजनितिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि तथा पार्टीले अघि सारेका निति, कार्यक्रम र लोकप्रियता र संगठनको प्रभाव जस्ता कारणले बेलबारीमा मसंग प्रतिष्पर्धा गर्ने बलियो दाबेदार कोही देख्दिन । यद्यपी मैले राजनिति शुरु गरेभन्दा पनि पछि जन्मेका साथीभाइहरु अहिले चुनाबमा प्रतिस्पर्धी बनेर आएका र युवापुस्ता र कार्यकर्ताको ठूलै हिस्सा उनीहरु र तिनका पार्टीमा पनि भएकोले अन्य उम्मेद्धारहरुलाइ कम आकलन गरेको चाहिं छैन ।